Ngaleso sikhathi, ukubukeka XP Vindous wenza revolution yangempela nje umqondo indlela uhlelo lokusebenza kumele ibukeke. Ukuma oyindilinga amawindi, umbono nezimnandi inkhulumomphendvulwano, ikhono udonse ewindini kusukela kokudlala kwevidiyo ye-desktop ngaphandle kokumisa ukudlala nokunye. Ngebanga lalokho, entsha Win 7 unezinkolelo konke okwakungokwayo best Win XP ne-Vista, futhi kakhulu ukwandisa amathuba. Lokho kukhona odumile Aero esibonakalayo!
Nokho, kwakukhona abanye emthethweni ukuthi imibono yokungabi nandaba yokuziphatha yayingahambisani emphefumulweni bona abonise esibonakalayo zakudala, asele kusukela Win 9X chungechunge. Laba bantu okunzima ukuyiqonda, ngoba ukuphila kuyisipho njalo kusikisela ukuthi ukusebenza - lokhu akukona konke. Nge uhlelo kumele kube kuhle kakhulu ukusebenzisana eziningi kangaka ngokuvamile ebuza indlela ukubeka sihloko Windows 7.
Ngaphansi kwengqikithi ethi umklamo ehloselwe yimuphi umbala wesikimu lengxoxo amabhokisi, imisindo, amafonti, isithombe ideskithophu, nokunye. Ukushintsha konke lokhu kufana ikamelo facelift. Ngaphambi wokuqonda ukuthi ukubeka ingqikithi ku-Windows 7, kubalulekile ukulanda. Phela, lo oshiwo ngenhla usayizi encane, ngakho lingadonswa ngisho at okuhamba kancane. Abathandi sandile design enkulu web adalwe lenqwaba amafayela yonke ukunambitheka nombala. Ngakho-ke, inkinga eyinhloko ayikona ukuhlanganisa kanjani ukubeka sihloko Windows 7 nokuthi ukukhetha okungcono.
Amalungu e-Microsoft kungenziwa belulekwa ukulanda amafayela ezidingekayo evela engxenyeni "Ukwenza okuthandwa nguwe" ( "Ukulanda") website Microsoft. Khona-ke yonke into ilula: ubunzima ukuthi, kanjani ukufaka Windows 7 indaba ephathwayo, akukho. Udinga nje chofoza kabili inkinobho yesinxele ku ifayela elandiwe (isandiso .theme) futhi uyavuma nezinguquko.
By the way, awukwazi ukucinga kanjani ukubeka sihloko Windows 7 kanye ngokwezifiso izilungiselelo uwedwa. Ukuze wenze lokhu, isigaba mahhala desktop kudingeka chofoza inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha Okomuntu siqu. Ekhona ikhompyutha izihloko ziyobonakala lapha - nje kufanele akhethe futhi ziyasebenza. Ukwakha umklamo wakho siqu zitholakala lapha nezixhumanisi umbala iwindi izilungiselelo, umsindo, i-desktop isithombe. Phela, lo "umbala ebhokisini", khetha "Izilungiselelo ezithuthukisiwe" futhi usebenzise imenyu wokudonsa phansi, ungakwazi ngezifiso ukubukeka uhlelo ngokucophelela.
Kodwa uma konke ngakho elula, lapho khona ungasebenzi owenza umbuzo "kanjani ukushintsha isihloko Windows 7?" Into wukuthi Microsoft ivimbe kungenzeka ukulungiswa anjalo esikhathini yokuqalisa bese Ikhaya izinguqulo wesistimu yokusebenza yayo. Bakwazi, uma sikubeka kahle, okungabazisayo, kodwa ukuthi kuyini. pirates Noble yore bakwazi emsebenzini ngalesi komkhawulo, kule ndaba, ngokuletha Vindous 7 Starter izinguqulo ezibizayo. Ngaphezu kwalokho, i-Inthanethi silula, ungathola khulula thwebula bese usebenzisa amathuluzi akhethekile ukuthi ususe oshiwo ngenhla ukubeka lock. Lisebenzisa indlela angewona awe-Microsoft njengoba esinye isixazululo, ngokuvamile kokweqa ezihlongozwayo Richmond program.
Ngakho, enye indlela yokungena emhlabeni komkhawulo Vindous 7 Ikhaya (Starter) - ukufaka uhlelo third-party. Isibonelo, lokhu - nguwe Panel. engavamile yayo wukuthi ukusebenza inakekelwa ngisho nokudluliswa ngqo kwenye ikhompyutha (sici okwamanje yafuna obukhulu, ephathekayo). umsebenzi wakhe ukuze ungeze yayo ongakhetha panel design. Ngaphezu kwalokho, kungaba kuhlanganiswe kwimenyu ideskithophu (into efanayo elivela uma chofoza inkinobho kwesokudla). Isekela ezintathu izinhlobo amafayela yokubhalisa (.msstyles, njll).
Ngaphezu kwalokhu indlela lolu daba kukhona indlela ehluke ngokuphelele. Siqukethe usebenzisa okhethekile-patcher ukuchibiyela amafayela ezithile zesistimu. Ngenxa yaleli khono ukushintsha isihloko ivuliwe. Ububi ukuthi hhayi wonke umuntu ufuna ngendlela ukushintsha ezibalulekile amafayela system. Nakuba kulula ukuyisebenzisa, mhlawumbe ngaphezulu.
Uhlelo kangcono ikhompyutha nokwenza: Ukubuyekeza
I-Mehran Karimi Nassery iyisikhumulo sezindiza esiyingqayizivele
Namatsisela Indwangu - i choice omuhle ngoba eliphezulu Decoupage